गाईको गहुँत सेवन गरेमा १४८ प्रकारका रोग निको हुने - ज्ञानविज्ञान
गाईको गहुँत सेवन गरेमा १४८ प्रकारका रोग निको हुने
गाईलाई सबैले पुज्ने गर्दछन किनकि गाईलाई लक्ष्मीको अवतार पनि भन्ने गरिन्छ । गाईको गहुत खादा धेरै रोगहरु ठिक हुन सक्दछ । गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका हुन् ।
स्थानीय गाई गोरुमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट आउने किरणलाई सोस्ने गर्छ । जुरोलाई सूर्य केतु नाडी भनिन्छ जसले सूर्य र चन्द्रमाबाट लिएको किरण शक्तिका रुपमा गाईको दूध, गहुँत र गोबरमा प्रकट हुन्छ ।
स्थानीय गाईको दूधमा ओमेगा—३ नामक तत्व पाइन्छ यसले स्मरण शक्ति बढाउँछ । सेरी ब्रोसाइड नामक तत्वले कुनै पनि प्रकारका अर्बुद रोग हुन दिँदैन । गोमूत्रमा कक्र्युमिन नामक तत्व पाइन्छ, जुन अर्बुदरोग निरोधक औषधि हो भन्ने तथ्य वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणित भएको छ ।
गौमूत्रमा अन्य २४ वटा तत्व पाइने र यसले मानव शरीरका सम्पूर्ण आवश्यकतालाई पूर्ति गरी निरोगी बन्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ ।
गाई र भैंसीको दुध मध्ये कुन स्वास्थ्यबर्धक होला ? हामी सबै अन्योलमा पर्छौ । देख्दा दुवै उस्तैं छन्, स्वाद पनि उस्तैं उस्तै हुन्छ । तर, गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुध बाक्लो र प्रोटिन पनि बढी पाइन्छ । भैंसीको दुध विशेषगरी खीर, चियाको लागि बढी उपयुक्त हुन्छ भने गाईको दुध नवजात शिशुका लागि स्वस्थ्यबर्धक हुन्छ । किनकी गाईको दुधमा प्रोटिनको मात्रा कम र पातलो हुन्छ जुन नवजात शिशुले सहजै पचाउन सक्छन् । गाई र भैंसीको दुधमा हुने केही फरक यस्ता छन् –
संसारभर नै गाईको दुध प्रयोग गरिन्छ तर पश्चिमीमुलुकका मानिसहरू अन्य देशका तुलनामा गाईको दुध बढी खाने गर्छन । भारत, पाकिस्तानलगायत देशमा भैंसीको दुध बढी प्रयोग गर्छन |
दुध खाएपछि निम्न कुराहरू खानु राम्रो होइन
१.कालो दालसँग दुध
३.मूला, माछामासु जस्ता पदार्थसँग दुध
दुधको साथमा मूला, माछामासु जस्ता पदार्थ नलिनुहोस् । यी चीज दुधसँग प्रयोग गर्दा यसले झन् नकारात्मक असर पर्छ । यसको प्रयोगले तपाइको छालामा समस्या देखिन सक्छ ।
४.नुन र करेलासँग दुध
५.तिलको सेवनसँग दुध
७.सुत्नु भन्दा अघि तातो दुध
Don't Miss it थाहा पाईराखौ ,यस्तो लक्षण देखिएमा क्यान्सर हुन सक्छ
Up Next चामलमा पाइने पोषक तत्वहरु के के हुन् ? जान्नुहोस